शनिबार, ०२ असोज २०७८, ०३ : ४८
निशान अपहरणमा कहाँ चुक्यो प्रहरी ?
अपहरण विरुद्धको अप्रेसनको पहिलो प्राथमिकता अपहरितको ज्यानको सुरक्षा नै हो । अपहरणकर्ताले आफू असुरक्षित भएको शंका मात्र लागे पनि अपहरितको ज्यान जोखिममा पर्ने भएकाले प्रहरी अपहरितको परिवारको नजिक समेत देखिन हुँदैन ।
चार इन्काउन्टर, चार कमजोरी
प्रहरीले पछ्याउँदै जाँदा घैँटे भागेको र प्रहरी टोलीलाई ताकेर गोली चलाएपछि सुरक्षाका लागि गोली चलाउँदा उनी मारिएको दाबी महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका अधिकारीले गरे । उनी जहाँ मारिएका थिए, त्यो बाटोबाट भाग्ने ठाउँ नै थिएन । उनीसँगै अन्य दुई जना स्थानीय युवासमेत गोली लागेर घाइते भएका थिए ।
‘अपहरणका आरोपीलाई जानाजान गोली हानेको हैन’
परिचितबाट हुने अपहरणका ७५ प्रतिशत घटनामा अपहरितको ज्यान जोखिममा हुन्छ । यस्तोमा फिरौती लिएपछि पनि हत्या हुन्छ । अपहरणकारी नयाँ हुँदा पनि अपहरितको ज्यान जोखिममा हुन्छ । यो घटनामा तत्काल पैसा आइहाल्छ कि भनेर अपहरण गरेको देखिन्छ । बालकको अपहरणपछि व्यवस्थापन गर्न नसक्दा हत्या गर्ने झैँ देखिएको छ ।
ज्युदो प्रहरी जवान मार्ने डिएसपी
कमाण्डर डिएसपी डा. तपनकुमार दाहालको भनाइ सत्य भएको भए प्रहरी जवान आचार्यको इहलीला त्यही दिन समाप्त भएको थियो । दाहालले झडपकै दिन उनको मृत्यु भएको घोषणा गरिदिएका थिए । तर उनै दाहालको नेतृत्वको प्रहरीले जुन चिकित्सकको टाउकोमा लाठी बजारेका थिए उनैको सक्रियतामा आचार्यको ज्यान जोगियो ।
एकअर्काबीच अन्तरक्रिया गर्न सहज बनाउने सामाजिक सञ्जाल पछिल्लो सयम ठगी गर्ने हतियार बन्दै गएइरहेका छन् । कास्कीमा मात्रै होइन, इमो, भाइबर, फेसबुक, म्यासेन्जरमार्फत देशभर ठगी धन्दा मौलाइरहेको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षकका रुपमा संगठनको नेतृत्व सम्हालेपछि पहिलो पटक यसै साता प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले पत्रकार सम्मेलन गरे । उनले यस बीचमा आफूले गरेको कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे । त्यो उपलब्धि–फेहरिस्त उनको संगठन नेतृत्व शैलीझैँ कमजोर देखिएको थियो ।
रौतहटमा प्रहरी अपराधीविच क्रस फायर, एक घाइते, एसएमजी भेटियो
रौतहटको राजदेवी नगरपालिकामा प्रहरी र एक समूहविच गोली हानाहान हुँदा एक जना गम्भिर घाइते भएका छन् । माेटरसाइकलमा अाएकाे समूह र प्रहरीविच गाेली हानाहान भएकाे हाे । तीन जनामध्ये एक जना घाइते भए भने २ जना भागेका छन् । घाइतेको साथबाट प्रहरीले सर्ट मेसिन गन फेला पारेको छ ।
दरबार हत्याकाण्डको फाइल किन नखोल्ने !
यदि तापक्रम मिलाएर फ्रिजमा दीपेन्द्रको रगतको नमुना राखिएको छ भने त्यसको परीक्षण गरी घटना भएको दिन दीपेन्द्रले गाँजा सेवन गरेको हो या हैन पुष्टि गर्न सकिन्छ । देवकोटाले आै‌ल्याएको रगतको परीक्षणको आधारमा दाबी गरिएझै‌ हत्याका दुई कारणमध्ये एक कारणको पुष्टि हुनसक्छ ।
खेलको आवरणमा धन्दा
थ्रिस्टार टिमका पूर्वखेलाडी अञ्जन केसीले २०७२ सालदेखि नै अनलाइन जुवाको कारोबार गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ । २०७२ कात्तिकमा उनी राष्ट्रिय टिमका कप्तान सागर थापासहित म्याच फिक्सिङमा समातिएका थिए । सो मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।
नक्कली नोटको सक्कली कथा
फिल्मका लागि छापेको नक्कली नोटका कारण फिल्म निर्माता माधव वाग्ले प्रहरी हिरासतमा छन् । नेपाली फिल्ममा यस अगाडि पनि यस्तै गरिने भए पनि फिल्मका लागि छापिएको नोट बाहिरिदा वाग्ले जाली नोट छापेको अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा पुगे । अन्य देशमा यस्तो घटनामा प्रहरीको भुमिका के हुन्छ ? हलिउडको घटना प्रस्तुत गरेका छौं ।
गोल्डेन डनको सान
म इन्डियन आर्मी हुँ । म पुलिस स्कुलै पढेको मान्छे हो । मलाई आफ्नो साथीलाई मार्न आउँदैन । लास्टमा तीन जना थिए त्यहाँ । मल्ल(टेकराज मल्ल), मने र सनम । अब सुनको राज त्यहीँ हुनुपर्छ । सनमलाई मारिएको छ । सनम मरेर गयो । त्यो यातना मैले मात्र दिएको हैन । कुटपिट झैँझगडा भइरहन्थ्यो । खोज्ने काम गरेको हो मैले । कसैलाई मार्ने इन्टेसन थिएन ।
यसपालि पनि २५ औं आइजिपीझैँ २६ औं पनि डिआइजीबाट नियुक्त हुनेछन् । प्रहरी नियमावली अनुसार अहिले बहाल रहेका १२ जना डिआइजी आइजिपीका लागि योग्य छन् । अन्यको तुलनामा सर्वाेत्कृष्ट तीन रहेका सर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल र पुष्कर कार्की चर्चामा छन् ।
भारतका कुख्यात यौन व्यापार हुने कोठीहरूमा नेपाली युवतीलाई बिक्री गरिने समाचार नौलो होइन । अझै पनि कैयौँ नेपाली युवती विभिन्न बहानामा भारत पुर्याई कोठीमा बेचिइरहेकाछन् । यस कथामा भने हालै नयाँ मोड आएको छ । पछिल्लो समय विदेशी युवतीलाई पनि भारतका कोठीमा राख्ने गरिएको खुलेको छ । र, यसको मूल ट्रान्जिट नेपाल बन्न थालेको छ ।
‘चेला’ हिरासतमा, ‘गुरु’लाई रेडकर्नर
चेला गणेश लामा अबैध हतियारकाे अभियाेगमा महानगरीय प्रहरी परिसरकाे हिरासतमाहुँदा उनका गुरु दिपक मनागें भागेर नेपाल बाहिर पुगेकाे निष्कर्ष निकाल्दै प्रहरीले रेडकर्नर नाेटिस जारी गराएकाे छ।
EXCLUSIVE : सिआइबी हिरासतमा ‘भिलेन’सँग एक घण्टा
राजेन्द्र खड्गीका अनुसार मार्सल आर्टका गुरु ओयामाको नाममा डकुमेन्ट्री बनाउन आफूसहित १३ जनाको टोली कोरिया पुगेको हो । आफू र सिनेमाटोग्राफर दिव्यराज सुवेदी फर्किए पनि बाँकी ११ जना अझै भिषा बाँकी छ भनेर उतै बसे ।